Ashinindaka သို့ လျှောက်ထားလွှာ (2) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » Ashinindaka သို့ လျှောက်ထားလွှာ (2)
Ashinindaka သို့ လျှောက်ထားလွှာ (2)
Posted by researcher on Mar 30, 2011 in News | 21 comments
Ashinindaka သို့ လျှောက်ထားလွှာ (2) ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦးရဲ့ဆန္ဒ
နိဗ္ဗာန်ကို ရှေးရှုခြင်း မပြုပဲ ပရဟိတအကျိုးဆောင်ရွက်နေတဲ့ ရဟန်းသံဃာတော်များနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောရရင် လူမှုရေးရှုထောင့်ကကြည့်ရင် သာဓု (၃) ကြိမ်မက အကြိမ်ကြိမ် ခေါ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဘုရာ့။ သို့သော်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ရဟန်းသံဃာတော်တွေကို ကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာ လူမှုရေးအရလေးစားလို့မဟုတ်ပါ ဘူး။ ဘာသာရေးအရ ကိုယ်မကျင့်ကြံနိုင်တဲ့၊ ကောင်းမွန်တဲ့ အကျင့်တွေ ကျင့်ကြံနေတဲ့၊ ကိလေသာတရားတွေ အထိုက်အလျောက် ကင်းစင်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုပြီး ကိုးကွယ် တာပါ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားတွေ လေးစားကြပါတယ်။ သိမှီလိုက်သူကော မသိမှီလိုက်သူကော လေးစားကြပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ တသသနဲ့ လေးစားလေးစား၊ ဦးမချဘူး ၊ ရှိမခိုးပါဘူးဘုရာ့။ အဲဒီလိုပဲ ပရဟိတ လုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတွေ ၊ လူသားကောင်းကျိုးတွေ ဆောင်ရွက်လို့ နိုဘယ်(လ်) ငြိမ်းချမ်းရေးဆု ရရှိတဲ့ သူတွေ ရှိပါတယ်ဘုရာ့၊ ဘယ်လောက်ပဲ လေးစားထိုက်တယ်၊ ချီးကျူးထိုက်တယ်ဆိုဆို ဘယ်သူမှ ရှိမခိုးပါဘူးဘုရာ့။ ဒါဟာ ဘာသာတရားအပေါ် ယုံကြည်ကိုးကွယ်တာနဲ့ လူတယောက်ရဲ့အတွေးအခေါ်၊ အပြုအမူတွေအပေါ် ယုံကြည် လေးစားတာချင်း ကွာသွားတာပါပဲဘုရာ့။
တပည့်တော်ရဲ့ သဘောကတော့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ လောကီလွတ်မြောက်ခြင်း တရား တွေကို သဘောမကျလို့ လက်မခံရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သဘောကျသော်လည်း မကျင့်ကြံချင်၊ မကျင့်ကြံနိုင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် လောကီမှာပျော်မွေ့သူသည် လောကီအလုပ်ကို လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဗုဒ္ဓရဲ့ လမ်းစဉ်ကို သဘောကျလို့ သာသနာ့ဘောင်ဝင်တယ် ဆိုရင်တော့ဖြင့် လောကီ လွတ်မြောက်ခြင်းတရားကို ကျင့်ကြံအားထုတ်သင့်တယ်လို့ တပည့်တော် ထင်ပါတယ်ဘုရာ့။ ရဟန်း၊ သံဃာတော်တွေ ပရဟိတလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တာ ကောင်းပါတယ်။ သို့သော်လည်းပဲ ရဟန်းသံဃာတော်တွေရဲ့ တာဝန်တွေမှာ မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ တရားတော်တွေကို ကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံ အားထုတ်ပွားများဖို့က အဓိကပိုကျတယ်လို့ တပည့်တော်ကတော့ ခံယူပါတယ်။ ရဟန်းဘောင်ဝင် ဘုရားတည်၊ ကျောင်းဆောက်၊ တရားဟောပြောပြသ၊ ဆိုတာတွေအပြင် မြတ်စွာ ဘုရားရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်း ကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံအားထုတ်ပြီး တရားကို စာတွေ့မဟုတ်ပဲ လက်တွေ့သိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ထူး၊ ပဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေသာ များပြားလာမယ်ဆိုရင်၊ ဒါဟာ သာသနာတော် တည်တံ့ခြင်းရဲ့ အဓိက အကြောင်းတရား တခု ဖြစ်လာလိမ့်မယ် လို့ တပည့်တော်က ယုံကြည်ပါတယ်ဘုရာ့။ လက်တွေ့မပါတဲ့ Theory ဟာ မပြည့်စုံသလို၊ Theory မရှိတဲ့ လက်တွေ့ဟာလည်း မပြည့်စုံပါဘူး။ မြတ်စွာဘုရားဟောကြား၊ ကျင့်ကြံခဲ့တာတွေဟာ Theory ကော လက်တွေ့ကော ပြည့်စုံပါတယ်။ ဘိက္ခူနီ သာသနာ ကွယ်ပျောက် တာဟာ ဘိက္ခူနီ မရှိတော့လို့ပါ။ အခုအချိန်ကြမှ ဘိက္ခူနီ ၀တ်ချင်လို့ မရနိုင်တော့ပါဘူး။ အဲဒီလိုပဲ သာသနာတော်မှာ အကျင့်၊ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ ရန္တာတွေ၊ ရဟန်းတော်တွေ နည်းလာတာနဲ့အမျှ သာသနာတော် ကွယ်ပျောက်ဖို့လဲ ပိုနီးလာပါလိမ့်မယ်။ လောကုတ္တရာတရား ကျင့်ကြံအားထုတ် ပွားများ ရမယ့်သူတွေက လောကီနဲ့သိပ်နီးစပ်နေရင် သာသနာတော် ပျက်စီးပါလိမ့် မယ်။ အုတ်အရောရော ၊ ကျောက်အရောရောနဲ့ သာသနာ့ အရေခြုံဆိုတာတွေ ပေါ်ပေါက်လာပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တဦးအနေနဲ့ တပည့်တော်ရဲ့ ဆန္ဒကတော့ သာသနာတော် သန့်ရှင်း၊ တည်တံ့ဖို့အတွက် တပည့်တော်တို့ ကိုးကွယ်နေတဲ့ ရဟန်း၊ သံဃာတော် တွေကို သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ နဲ့ ပြည့်စုံနေစေချင်ပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ တရား လမ်းစဉ်တွေကို ကိုယ်တိုင် ကျင့်ကြံ၊ ပွားများ၊ အားထုတ် နေတယ်ဆိုတာမျိုး ဖြစ်စေ လိုပါတယ်။ လောကီရေးရာ ကိစ္စတွေ၊ လောကီစည်းစိမ်တွေနဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံး ကင်းအောင်နေစေလိုပါတယ်။ သာသနာတော်သာ သန့်ရှင်း ၊ တည်တံ့နေမယ် ဆိုရင် ပြန့်ပွားရေးဆိုတာဟာ သိပ်အားထုတ်စရာမလိုပဲ ပြီးမြောက်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ တပည့်တော် ခံယူုပါကြောင်း လျှောက်ထားအပ်ပါတယ်ဘုရာ့။ ဒါဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုယ်တိုင် ယုံကြည် လက်ခံ ကိုးကွယ်နေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ တပည့် တော်ရဲ့ ရင်ထဲက ဆန္ဒတွေပါဘုရာ့။
တပည့်တော်ရဲ့ ရေးသားချက်တွေက ဘုန်းကြီးစာချ ဖြစ်နေရင် ခွင့်လွှတ်တော်မူပါဘုရာ့။ တခါမျှလဲ ဘုန်းကြီး၊ ရဟန်းတွေကို ဒီကိစ္စတွေ မဆွေးနွေးဖူးပါဘူး ဘုရာ့။ တပည့်တော် အရေးအသားတွေ မှားမှာစိုးလို့ အကြိမ်ကြိမ် Edit လုပ်ထားပါတယ်။ ဒီကြားထဲက အရေးအသား အသုံးအနှုန်း လွန်တာတွေရှိရင် ခွင့်လွှတ်ဖို့ တောင်းပန်ပါ တယ်။ မေတ္တာ၊ ဂရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပေက္ခာ ဆိုတဲ့ ဗြဟ္မစိုရ် တရားလေးပါးမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာက မေတ္တာတရား ရှေ့ထားတာမို့ ခွင့်လွှတ်မယ်လို့လဲ ကြိုသိထားပါတယ်ဘုရာ့။
” သာသနာတော်သာ သန့်ရှင်း ၊ တည်တံ့နေမယ် ဆိုရင် ပြန့်ပွားရေးဆိုတာဟာ သိပ်အားထုတ်စရာမလိုပဲ ပြီးမြောက်သွားပါလိမ့်မယ် ”
” သာသနာတော် ပြန့်ပွားရေး ” is not that much easy.
It seems, wrongly underestimate the other religions &
wrongly overestimate your own Buddhist religion.
Actually, Other religions are far far more strong & systematically propagated than our Buddhist Religion.
My opinion, Our Buddhist religion is too soft & etc…
it cannot survive for very long period ( if still follow recent way ).
( PS, I amastrong follower of Buddha ( Buddhist ) )
ရေးထားတာ ကောင်းတယ်။ လွန်တာမရှိပါဘူး။ အလွန့်အလွန်ကို ကောင်းပါတယ်။
စာစဏာ တော် နှစ်ထောင့်ငါးရာကျော်လေကြီးသောအခါ ကျင့်ကြံသူတွေရှိသလို …အင်းမပြောပါနဲ့ ခင်ဗျားပြောတာကိုပေါင်ကို လှန်ထောင်းတာများလားလို စဉ်းစားကြည့်တယ် ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်ရမယ်တဲ့နော် ဟေး ဟေးဟေး ဟားဟား ဟား…ကျွန်တော်အရူးပါ….
အင်မတန်ကောင်းတဲ့ post ပါဘဲ။သဘောကျလို့ like ပေးထားပါတယ်။
About Theravada Buddha (ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုရားရှင်အကြောင်း ) by Dhamma Rasa (ဓမ္မရသ)
ဒီပို့စ်ကိုရေးတဲ့ researcher ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် …
စေတနာရှေ့ထားပြီး ရေးသားထားမှန်း သိသာထင်ရှားတယ် …
ဓမ္မစကြာတရားဒေသနာသည် ဘုရားရှင်၏ ၄၅နှစ်တာကာလအတွင်း ဟောကြား သော တရားအားလုံး၏ အုတ်မြစ်တရားလည်း ဖြစ်သည်။ ပထမနေ့၌ တရားနာ သူငါးဦးအဖွဲ့မှ တစ်ဦးသာ ဘုရားတရားကို နားလည်ခဲ့သည်။ ထိုနေ့မှာပင် ထိုတရား သိသူသည် ဘုရားထံ တပည့်သံဃာအဖြစ်ခွင့်ပန် ၀င်ရောက်ခဲ့သည်။ နောက်တစ် ရက်စီ၌ တစ်ဦးစီ တရားရပြီး သံဃာဝင်များ ဖြစ်ကြသည်။ ဤသို့ဖြင့် ၀ါတွင်းသုံးလ ကာလ တရားဟောခဲ့ရာသီတင်းကျွတ်တွင် သံဃာဦးရေခြောက်ဆယ် ရရှိလာ သည်။ ဘုရားရှင်သည် ဤသံဃာဝင်များကို လူအများအတွက် အကျိုးစီးပွားဖြစ်စေ ရန်(ဗဟုဇန ဟိတာယ)၊ လူအများအတွက် ချမ်းသာသုခရစေရန်(ဗဟုဇန သုခါယ)၊ လောကကြီး ငြိမ်းချမ်းရှင်သန်စေရန်(လောကာနုကမ္ပါယ)– ဟူသော တရားရည်မှန်း ချက်များချပေးပြီး၊ တရားဟောရန်အတွက် တစ်ခရီးလျင် နှစ်ပါးမသွားဘဲ တစ်ပါး ကျစီသွားကြ ဟုမိန့်ကြား စေလွှတ်ခဲ့သည်။
အတော်ကောင်းတဲ့ ရေးသားတင်ပြချက်ပါ။ ဒီတင်ပြချက်ကို ဦးဇင်းရဲ့ http://www.dhammagarden.com မှာတင်ခွင့်ပြုပါလို့ ခွင့်တောင်းပါရစေ။
ပြောနေကျစကားပြန်ကောက်ရရင်၊ ဗုဒ္ဓ သည်ကျင့်စဉ်ကိုသာ ပြဆိုခဲ့ပါတယ်။ နောက်လိုက်များရှိလာလို့သာ သံဃာဆိုတဲ့ဝေါဟာရ နဲ့ သာဿနာလို့နောက်ပိုင်းတွင်လာတာပါ။ ယေရှုခရစ်က တပည့်ကြီး ပီတာကို church တည်ထောင်ဘို့ မိန့်ခဲ့လို့ church သာဿနာရယ်လို့ အဲ့ဒီကတည်းကရှိခဲ့ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓက ဗုဒ္ဓသာသနာထူထောင်တော့ဟေ့ – လို့ ဘယ်ကျမ်းဂမ်မှာမှပြခဲ့တယ်လို့တွေ့ဘူးပါဘူး။ သံဃာယနာ ဟာ ဂေါတမ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီးမှ ကျင့်စဉ်တွေသွေဖီလာတဲ့ အရိပ်အရောင်ရှိလို့ ကျင်းပပြုလုပ်ရတာပါ။ ဒီအစည်းအဝေးကြီးတိုင်းကို ဗုဒ္ဓကျင့်စဉ်အယူရှိကြသူ ခေါင်းဆောင်ဆရာတော်ကြီးတွေက အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်ကို သတင်းဖြန့်ဝေခြင်း၊ ဗုဒ္ဓဟောဆိုချက်နဲ့ ကျင့်စဉ်တွေကို အပြန်အလှန်ဖြန့်ဝေပြီးကာလရှည်ကြာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးမှ၊ တညီတညွတ်တည်း သဘောတူကြရပါတယ်။ နီးစပ်ရာလက်တို့ပြီး၊ သမ္မတ ၊ ၀န်ကြီးချုပ်တို့လောက်ကဦးစီးလုပ်ရုံနဲ့ သံဃာယနာမမည်ပါဘူး။
လောကီနဲ့ကင်းလို့မရတဲ့လူသားစင်စစ်ရဟန်းများဖြစ်တာကြောင့် ဆရာ၊ တကာ နဲ့ပစ္စည်းလေးပါးအလို့ငှာ ဒီကနေ့ရဟန်းများဟာလည်း၊ လောကီ ရေးကိစ္စဖြစ်တဲ့ ဗေဒင်၊ ဆေးဝါး၊ လက်ဖွဲ့၊ အဟော (သည့်ထက်ဆိုးတာတွေတော့ အားလုံးသိပြီးမို့ထပ်မပြောပါရစေနဲ့တော့) လုပ်ရင်းကနေ၊ ဒီဆ၇ာတော်စွမ်းတယ်။ ဒီဆရာတော်က မ, တယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေ ရေးကြီးခွင်ကျယ်ဖြစ်လာပါတယ်။ လုပ်ပေးတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကလည်း၊ ကိုယ်ကိုယ်ကို အဟုတ်ထင်လာကြတာ က (၉၉%) ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီကြားထဲ အာဏာရှိသူတွေ ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုဒါဏ်ကိုမတွန်းလှန်နိုင်ကြတာလဲပါပါတယ်။
မြန်မာအပါအ၀င်အရှေ့တိုင်းနိုင်ငံတွေအားလုံးလိုလိုမှာရပ်ရွာထဲ မှာသြဇာရှိကြတာ၊ ဘုန်းကြီးတွေပါဘဲ။ ဘုန်းကြီးပြောရင်၊ ဘုန်းကြီးကဆုံးဖြတ်ရင်ကိစ္စတွေပြီးသလို၊ ပြဿနာတွေလည်းဖြေရှင်းပြီးဖြစ်တာမို့၊ ရပ်၇ွာအုပ်ချုပ်ရေးမှာ ဘုန်းကြီးတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကသိပ်အရေးကြီးတာဒီကနေ့အထိပါ။
ဆောင်းပါးရှင်ရေးသလို လောကီရေး မှာလူမှုရေးလုပ်တာချီးမွန်းမိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သံဃာဆိုတာသည်သံသရာကကျွတ်ရာကျွတ်ကြောင်းကိုဘဲ ဟောပြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းကျင့်ရပါတယ်။ သံသယာမှာလည်ကြောင်းကို မပြောရပါဘူး။
ရှင်းပါတယ် – ultimate goal ကနိဗ္ဗာန်ပါ။ ဒါကိုဘဲဂေါတမဗုဒ္ဓကပြဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင်လဲ ခက်ခဲနက်နဲပြီး ကျင့်ကြံရခက်တဲ့ အဘိဓမ္မာကိုသူကိုယ်တိုင်တောင်လူတိုင်းကိုမရှင်းပြခဲ့ပါဘူး။
ကျွန်တော် ကတော့ ဘုန်းကြီးများ ပိုက်ဆံကိုင်တာ၊ ကားမောင်းတာကို အပြစ်မမြင်ဘူး။ ကျွန်တော် ပြောခဲ့သလို ပဲ အခုခေတ်မှာ ဘုန်းကြီးအလုပ်တွေကို လူတွေက ကြာရှည် မလုပ်ပေးနိုင်ကြဘူးလေ။အထူးသဖြင့်နိုင်ငံခြားမှာပေါ့။ အရာရာ ပိုက်ဆံပေးရတယ်။ ဒါတွေက ခေတ်ကပြောင်းနေလို့ ဖြစ်ရတာ။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုဆိုပြီး ဘုန်းဘုန်းတွေဘက်က အတင်းအလှူခံတာတို့၊ စီးပွားရှာသလိုမျိုးတို့ ဘာတို့ မလုပ်ဖို့ လိုတယ်။ ကြားနေရတယ်။ တရားတပွဲ သိန်း ဆယ်ဂဏန်းတွေ။အဲဒီလိုမျိုးသာ ဆို သာသနာပြန့်ပွားရေးဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာပြီ။ ပျက်ဆီးနေတာတွေကတော့ မြင်နေရပါတယ်။ ဥပမာ ရွှေတိဂုံ ဘုရားပေါ်မှာ တိုးရစ်ဂိုက်လုပ်နေတာ၊ ပြောရင်တော့ နိုင်ငံခြားသားတွေကို သာသနာပြုနေတာပေါ့လေ။ တကယ် သာသနာပြု တာရှိမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဂိုက်လုပ်နေတာတွေက သိသာတယ်။ ၂ လုံး ၃ လုံး ဒိုင်ကိုင်တာတွေ မဖြစ်သင့်ဘူး။ ဆေးကုတာရောပေါ့။ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးမှာ အတင်းလိုက် အလှူခံတာတွေ (နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တွေကို အထူးသဖြင့်) မလုပ်သင့်ဘူး။ လောကီ အရာ (ငွေ၊ကား၊ မြေနေရာ ဥပမာအားဖြင့်ပေါ့) မဖြစ်မနေထိတွေ့ရရင် သာသနာ အတွက် လုပ်ပေးပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
ရွာထဲမှာ ဘဒ္ဒန္တတပါး ပေါ်ထွန်းလာပြန်ပြီဗျို့။ ဘဒ္ဒန္တမိုက်ကယ်အောင်ပု တယောက် ဘယ်ပျောက်နေပါလိမ့်။ ဧကန်ဏ မန်းဖို့ တရားစာအုပ် ရှာမတွေ့ သေးဖူးထင်တယ်။ :D
မဟုတ်ဘူး ဦးကြောင်ရေ၊ အဘပု weekly eleven ထဲမှာ သွားသောင်းကျန်းနေတာ။
ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲကို ဘာဖြစ်လို့ ဖိနပ်ချွတ်ရတာလဲ ဆိုတာကိုလည်း နက်နက်နဲနဲ ရှင်းပြစေချင်ပါတယ်။
အချို့ကျောင်းတွေက ချွတ်စရာမလိုဘူးလို့ ပျော့ပျောင်းပြီး အချို့ကျောင်းတွေကတော့ ချွတ်တာကို ဘာမှ မပြောပါ။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ အရိယသစ္စာတရားနှင့် ဗြဟ္မဏ၀ါဒ ပရမတ္တသစ္စာဒဿနတို့နှင့် ဗုဒ္ဓ၏ကံ/ ဂျိန်းကံတို့အား ကွဲကွဲပြားပြား သိရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဗုဒ္ဓဓမ္မစီးဆင်းခဲ့သည့် အတိတ်သမိုင်းကို သေသေချာချာ လေ့လာနိုင်ကြပါစေ။ သမိုင်းကို မသိရင် လူအ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ သမိုင်းပညာရှင်တစ်ဦးက ဆိုထားပါတယ်။ ထပ်ပြီးတော့ သမိုင်းကို တလွဲသိနေရင် ရူးလိမ့်မယ်။ မိမိတို့ ရိုးရာစွဲ၊ ဆရာစွဲ၊ နည်းစွဲ၊ ၀ါဒစွဲများဖြင့် အသိဉာဏ်များ မပိတ်ထားကြပါနှင့်။ ဖွင့်ထားသော မျက်စိ၊ နား၊ ဉာဏ်တို့ဖြင့် နှိုင်းယှဉ် လေ့လာကြပါ။ ရှေ့ဘ၀၊ နောက်ဘ၀စွဲ ဂျိန်းဝါဒ စိတ်ကူးယဉ်အယူအဆနှင့် လူ့တန်ဘိုးမဲ့အောင်၊ လူ့ဝတ္တရားတွေပျက်ကွက်အောင် တစ်ကိုယ်ကောင်းဝါဒ ပရမတ္တသစ္စာ ဟိန္ဒူဗြဟ္မဏဒဿနတို့ဖြင့် ဖုံးလွှမ်းခြင်းခံနေရသော ဗုဒ္ဓ၏ ရိုးရှင်းသည့် အရိယသစ္စာနှင့် ကံကိုသိရှိနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရှေ့ဘ၀၊ နောက်ဘ၀အစွဲနှင့် ပရမတ္တသစ္စာဒဿနတို့ဖြင့် အိပ်ပျော်နေကြသော မိတ်ဆွေများ အိပ်ခြင်းမှ နိုးထနိုင်ကြပါစေ။ ဓမ္မ E-book စာအုပ်များ လေ့လာလိုပါက http://sites.google.com/site/sayamvasi/toe-bookspage အင်တာနက် လိပ်စာတွင် download ဖြင့် ရယူနိုင်ပါသည်။ လေ့လာဖို့အတွက် နောက်ထပ်လိပ်စာကတော့ http://myanmarengineer.org/forums/archive/index.php/t-2632.html ဖြစ်ပါတယ်။
download ရလိုပါက http://ariyadhamma.multiply.com တွင် စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။
အရှင်ဘုရားပြောတာ တပည့်တော်ရဲ့ ရေးသားချက်ကိုလား၊ ကို kai ရဲ့ comment ကိုလား ဘုရာ့၊ တပည့်တော်ကို ပြောတာ ဆိုရင်တော့ အရှင်ဘုရား သဘောအတိုင်းပါပဲ။
သင်္ကန်းစလေး လက်ပတ်ထားတာကို သံဃာ အမှတ်နဲ့ ကိုးကွယ်ရမဲ့အချိန်မရောက်သေးဘူးနော်..။
ဥပမာလေးတခု။ အဆုတ်ရောဂါဖြစ်တဲ့သူဟာချောင်းဆိုးပါတယ်။ အဆုတ်ရောဂါမကုပဲနဲ့တော့ ချောင်းဆိုးမပျောက်ပါဘူး။ ခက်တာက အဆုတ်ရောဂါပျောက်အောင် ကုမပြီးခင်ကြားထဲက အချိန်အတွင်းမှာလဲ ချောင်းဆိုးမနေချင်ပါဘူး။ ဒီတော့ အဆုတ်ရောဂါလဲကုမယ်၊ ကုနေစဉ်အတွင်း ချောင်းဆိုးသက်သာတဲ့ဆေးလဲစားမယ်ပေါ့။
၀ိနည်းတော်ကို အလွန်လေးစားတဲ့ အမရပူရ ဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသရဲ့ အနာဂါတ်သာသနာရေး ကျမ်းစာအုပ်အပါအ၀င် အခြားစာအုပ်များမှာ သီလ သမာဓိ ပညာ ပြည့်စုံအောင်ကျင့်ရင်း ရပ်ရွာအကျိုး လူထုအကျိုးကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပုံများကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ကိုလင်းဝေကျော်ရဲ့ comment နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်သိသလောက်ပြောပြပါရစေ။
ဘုန်ကြီးကျောင်းထဲ ဖိနပ်မစီးတာကတော့ ဘုရားနဲ့ဘုရားသားတော်သံဃာတွေ နေထိုင်တဲ့နေရာဆိုတဲ့အမှတ်နဲ့ မစီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်တစ်ချို့ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေက ၀င်ပေါက်နဲ့ကျောင်းတိုက်က အတော်ဝေးပါတယ်။
အဲဒီအခါခြေဗလာနဲ့လျှောက်ပြီးကျောင်းပေါ်တက်ရင် ကျောင်းကိုညစ်ပေစေတဲ့အတွက် အကုသိုလ်အပြစ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်တစ်ချို့ကျောင်းတိုက်တွေက ကျောင်းဝင်းထဲဖိနပ်စီးခွင့်ပြုပြီး ကျောင်းပေါ်တက်တော့မှ ဖိနပ်ချွတ်ရပါတယ်။
စေတနာဟာကံပါဘဲ။ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အခြေခံဟာ စိတ်စေတနာပေါ်မှာအခြေခံပါတယ်။
ကျွန်တော် တစ်ခုလောက်ပြောကြည့်ချင်ပါတယ်။ ဓမ္မစက်တည်ဖို့ အာဏာစက်နဲ့ ကုညီပံ့ပိုးမှုထည်းလိုမယ်ထင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ … ဘုရင်အဇာတသတ် ရဲ့လက်ထက်မှာ သင်္ဂယနာတင်တော့ “အရှင်ဘုရားတို့ ဓမ္မစက်တည်ဖို့အတွက် တပြည့်တော် အာဏာစက်နဲ့ အပြည့်အ၀ကူညီပံ့ပိုးပါ့မယ် “လို့ လျှောက်ခဲ့တာကိုထောက်ယှဉ့်ပြီးပြောတာပါ..။